Archive du 20190920
Tandindomin-doza ny firenena Tena marary ny fampianarana
36,91% ny taha-pahafahana ho an’ny fanadinana BEPC 2019 teto amin’ny Cisco Antananarivo renivohitra raha toa ka 48,81% tamin’ny herintaona.
Politika sy fiainam-pirenena Hiverina an-tsehatra ny HVM
Antoko nanana ny naha izy azy ny HVM saingy tsy re tsaika intsony taorian`ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany.
Tetikasa Tanà-Masoandro Ho lasan’ny sinoa indray ny tsena ?
Tonga nitsidika sy nitsirika ny toerana hanatanterahana ny tetikasa « Tanà-Masoandro »
Depiote kandidà ben`ny tanàna Afaka miverina raha tsy voafidy
Afaka miverina depiote ireo nilatsaka hofidiana ho ben’ny tanàna raha tsy voafidy. Raha ny andininy ao amin`ny lalàmpanorenana mifandraika amin`ity tranga ity dia ny and.
Fifidianana sefo fokontany « Atao voalohany raha sahy ny fitondrana ! »
Mahagaga, hoy ny filohan’ny antoko politika Natiora, Mihari-Ni-Rencho, fa isaky ny misy fifidianana dia misy fanoloana sefo fokontany.
Distrikan’Atsimondrano Manantena ben’ny tanàna mampandroso
Manantena ben’ny tanàna mampandroso azy ny distrikan’Atsimondrano, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana, Alain Ratsimbazafy.
FJKM Antanety Fitahiana Notokanana ny Akany Fitahiana, tsangambaton’ny faha-150 taona
Nankalaza ny faha-150 taona niorenany ny fiangonana FJKM Antantety Fitahiana Ambohimanarina.
Fampianarana ambony Mitokona ny SECES Fianarantsoa, manambana ny eny Ankatso
Nanatanteraka “Journée de solidarité” ireo mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra (SECES) ao amin’ny oniversiten’i Fianarantsoa.